Izany Train Bridges dia mampino an'ireo trano mahagaga. Azonao atao ny mahita enina vatosokay tohany sasatra amin'ny andry avo dimy. Ny tetezana mitondra mivantana any amin'ny 216 metatra ny lava Landwasser tonelina.
Scottish nanan-tantara io tsara tarehy hiampita ny renirano No mivoaka avy Queensferry, fotsiny andrefan'i Edinburgh.
Koa satria izany ihany no 409 metatra ny lavany, misy ihany koa ny fizarana ny tetezana ho an'ny mpandeha an-tongotra sy ny mpandeha bisikileta. Misy ny iray teo an-daniny ny fiaran-dalamby lalamby. Ny olona no nanomboka mametraka 'ny fitiavana padlocks' ny fefy eo amin'ny rail sy ny mpandeha an-tongotra hatramin'ny faritra 2008.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/breathtaking-train-bridges-europe/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)